Iindlela eziqinisekisiweyo IziBonelelo zoShishino oluNcinci kwiNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 11, 2015 NgoLwesine, uJuni 11, 2015 Douglas Karr
Uya kumangaliswa kukuba, emveni kwako konke ukufundwa kwamatyala kunye nobungqina, kusekho abachasayo phaya kwilizwe lamashishini amancinci abakholelwa ukuba amajelo asekuhlaleni kukuchitha nje ixesha. Ungandivi kakubi… inokuba yinkcitha xesha. Ukuba uchitha ixesha lakho ubukele kwaye uthumela iividiyo zekati, ngekhe ufumane ishishini elininzi.
Ndiqinisekile xa amashishini okuqala afumana iifowuni, iinkokheli zazinenkxalabo yokuba abasebenzi baya kuncokola nabahlobo babo imini yonke, nabo. Kodwa ngoku akukho mntu ubuza ngokubaluleka kokukwazi ukuqhagamshela kwishishini kwifowuni- zombini eziphumayo okanye ezingenayo. Imidiya yokuncokola yahlukile… yindlela yokunxibelelana kwaye ixhomekeke kwisicwangciso esisebenziseka nenkampani yakho ukusisebenzisa.
Ukuba ujoyina amaqela, wabelana ngezihloko zexabiso, uqhagamshele kwaye ulandele abachaphazeli, uncede abantu abaneengxaki, ukhuthaze umxholo wakho, curate kwaye wabelane ngomxholo omkhulu kwabanye, ungakhula inethiwekhi emnandi enokubonelela ngeminyaka yengeniso.
Ingxaki nangona kunjalo ilele ekubeni ubekho kwimithombo yeendaba zentlalo kodwa ukuba la mashishini ayisebenzisa njani imithombo yeendaba zentlalo. Ukusuka kwimbono yeshishini elincinci, ukuthengisa kwimithombo yeendaba zentlalo kungaphezulu kokufumana nje ukuthanda, abalandeli, ukuphindaphinda kunye nokuphindaphinda, kodwa endaweni yokufumana ezi zibonelelo zilandelayo, kunye nokunye, oko kuya kwenza igalelo elikhulu kwishishini. UJomer Gregorio, ukuThengiswa kweDijithali yeCJG.
Iindlela ezi-8 zokuThengiswa kwezeNtlalontle eziNceda amaShishini amaNcinci
Ukwanda kwetrafikhi yewebhusayithi.
Ivelisa zikhokelela kwiindleko ezincinci.
Ukunyusa ukuthengisa umxholo.
Yandisa ulwazi lwebrand.
Imisela uphawu lwekhampani yakho.
Inika ukuqonda okukhulu kwabaphulaphuli.
Iphucula ukunyaniseka kwegama.
Kuyathakazelisa ukuba i-CJG isebenzise igama uhlobo kuyo yonke infographic. Ngelixa kunedatha eninzi yokuxhasa zonke izibonelelo zemidiya yoluntu kwimarike, ndingatsho ukuba ifuthe lakho abantu inkulu kakhulu. Imidiya yokuncokola ayisiyo mveliso okanye inkonzo ethetha kuwe evela kwishishini elincinci, ngabantu beshishini elincinci!
Abantu banika ithuba lokuthemba kunye nokuzibandakanya uphawu lwakho olungenzi. Abantu banokukwazi, bakuthembe, bakubuze imibuzo, kwaye ekugqibeleni bathenge kuwe. Ibranti yakho iyazuza kuko konke oku, ewe… kodwa ngenxa yabantu bakho. Eyona nto iphambili kuyo, yiyo zentlalo imithombo yeendaba, hayi indlela enye kuphela.
tags: Intengiso yeDijithali yeCJGhubspotkwi-infographicShishiniizibonelelo zosasazo zasekuhlalenikwimidiya yoluntu